Repository eo an-toerana CentOS 7 (fitaratra) | Avy amin'ny Linux
BrodyDalle | | fampiharana, FampiasanaLLL's UseLinux, Avy amin'ny Linux, Fitsinjarana, GNU / Linux, Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Raha eny dia entiko eto aminao ny fomba fanaovana fitaratra an'ny CentOS 7. Inona avy ireo tombony azo avy amin'izany? Anisan'ireny ianao, mitahiry fantsom-pifandraisana Internet, mitazona kopian'ny toerana fitahirizam-bokatra misy anao izay misy haingana kokoa ny fampidinana sy ny fametrahana azy, ary ny tena lehibe indrindra dia tena ilaina tokoa ho mpizara fanavaozana raha manana mpizara 10 na toeram-piasana 1000 ianao CentOS Heveriko fa io no safidinao tsara indrindra satria afaka manolotra serivisy fanavaozana haingana sy amin'ny hafainganan'ny tambajotranao LAN ianao.
Ankehitriny, afaka manamboatra fitaratra amin'ny fomba 10 ianao fa holazaiko anao ilay iray fa raha ny fahitako azy no haingana indrindra sy mahazo aina indrindra, tsara azonao atao ny manao ny fitaratrao amin'ny fizarana rehetra manohana rsync. Enyiiiiii! Na iza na iza, ny ampahany rsync ihany no azonao vakina, manaova repository centOS eo an-toerana amin'ny ubuntu, debian, fedora, redhat, slackware, manohana an'i rsync daholo izy ireo
rsync dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny rafitra Unix sy Microsoft Windows izay manome fifindrana angon-drakitra fanampiny, izay miasa ihany koa miaraka amin'ny angona voafintina sy voaaro. Amin'ny fampiasana teknika fandefasana delta dia ahafahanao mampifandray rakitra sy lahatahiry eo amin'ny masinina roa amin'ny tamba-jotra na eo anelanelan'ny toerana roa amin'ny milina iray ihany, mampihena ny habetsaky ny angona nafindra.
Manohy mametraka rsync izahay
Raha vao apetraka dia tsy maintsy mijery ny lisitry ny Fitaratra CentOS fitaratra akaiky ny toerana misy anao izay miasa miaraka amin'i rsync (andry fahenina io) Toerana Rsync
Mamorona fampirimana ahafahanao mametraka ny fitoeram-bokatra, fitaratra CentOS 7 fotsiny no nataoko, feno isos sy ireo lahatahiry misy, izay nahatratra 38 GB, ka diniho raha hanao fitaratra ampahany amin'ireo kinova centOS hafa ianao. na fitaratra feno. Ohatrinona ny habaka tokony hipetrahany? Izany dia zavatra tokony hozahanao dinihina.
Ny tahiry dia misy ireto lahatahiry ireto:
miasa toy izao i rsync:
Amin'ny famafana ny tag - voailika ary –misaraka dia azonao atao ny tsy miraharaha ireo lahatahiry na rakitra, ohatra ny folder iso, na .iso fisie, tena mora sa tsy izany?
Miaraka amin'ny safidy –Delete, hamafa ireo rakitra tsy misy intsony ao amin'ilay loharano.
-a arisiva sy magazay
-q fomba mangina, manafoana ireo hafatra tsy misy hadisoana
-z mametaka angona mandritra ny famindrana
-H tazomy ireo rohy sarotra, raha tianao izany dia omeko anao ihany koa ny safidy -l mitazona symlinks
Ahoana no nataoko? tsotra toy izao:
Aza maika fa hazavaiko ny antony anaovako izany.
–Delay-fanavaozana Apetraho amin'ny faran'ny fampidinana iray manontolo ireo fisie nohavaozina rehetra, azonao ve aho? Izany hoe tsy manavao isaky ny misintona rakitra vaovao izy, fa ny mifanohitra amin'izay, raha misy fisie 100 vaovao, aorian'ny famaranana ireo rakitra 100 vaovao, rsync azy ireo apetraka amin'ny toerana
rsync: //ftp.osuosl.org/centos/7/ satria ny CentOS 7 ihany no tiako hatao
/ var / www / html / repo / CentOS / 7 aiza no hametrahako ny fisie rehetra ataoko avy amin'ny loharano.
Tsy ilaina izany fa omeko ny fonosana aho mpamorona, ny zavatra tsotra ataony dia ny manome azy ny toetra http ary mamorona index ho an'ny tahiryo
Avy eo mihazakazaka fotsiny ny baiko manondro ny kitapom-bolanao
Vantany vao vita ianao dia tsy maintsy zaranao amin'ny fomba sasany, mampiasa mpizara http foana aho, manohy amin'ny CentOS 7, afaka mametraka mpizara tranonkala fototra toy izao ianao (ampiasao httpd, tsy apache izany)
Mamorona rohy an'ohatra avy amin'ny tranokala fitahirizana mankany amin'ny folder "www"
Mamorona ny lahatahiry azo zahana tranokala sy tranonkala izahay
Manitsy ny fisie httpd.conf izahay mba hanampiana ireo tranokalanay mavitrika amin'ny tranokala mavitrika
Ampio ity tsipika ity amin'ny faran'ny fisie
Ampidiro ireo tranokala alefa / *. Conf
Mamorona sy manitsy ny tranokalanay izahay
CustomLog /var/log/httpd/requests.log natambatra
Mampihetsika ny tranonkalantsika izahay amin'ny alàlan'ny famoronana rohy an'ohatra
Manova ny tompona sy ny anton'ireo rakitra sy lahatahiry izahay ho an'ny apache
Izahay dia manatanteraka ity baiko manaraka ity ka ny mpizara tranonkala dia manomboka amin'ny fotoana nanombohanay ny masinina
Mamerina ny mpizara tranonkala amin'ireto baiko manaraka ireto izahay
Ahoana no hampiasantsika azy?
Mamorona rakitra ao amin'ny /etc/yum.repos.d/local.repo ary apetaho ireto andalana manaraka ireto:
[os] anarana = master - Base baseurl = http: //ip na url/ repo / CentOS / $ releasever / os / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = fisie: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [fanavaozana] anarana = master - Fanavaozana baseurl = http: //ip na url/ repo / CentOS / $ releasever / fanavaozana / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = fisie: /// sns / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 [extra] anarana = master - Extras baseurl = http: //ip na url/ repo / CentOS / $ releasever / extra / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = rakitra: /// sns / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 anarana = master - CentosPlus baseurl = http: //ip na url/ repo / CentOS / $ releasever / centosplus / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = rakitra: /// sns / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Mamelombelona ireo trano fitahirizana izahay amin'ny:
Izany no izy amin'ity indray mitoraka ity. Aza adino ny manaraka akaiky ny lahatsoratro sy ity tranonkala ity. Manaova hevitra ary noho izany izahay rehetra dia mizara ny fahalalantsika, mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » CentOS 7 toerana fitahirizana (fitaratra)
Mety ampiasaina amin'ny solosaina PC misy fampiasa farany ve i Centos? Sa fandaniam-bola very maina? Notsapaiko tamin'ny alàlan'ny Live-usb ary tena tiako izany.
BrodyDalle dia hoy izy:
Tena marin-toerana izy io, tena safidy tsara. Misaotra tamin'ny hevitrao
Mamaly an'i BrodyDalle
Ry elendilnarsil malala dia mampiasa ny Fedora ho mpampiasa farany miaraka amin'ny centos dia mila miasa be ianao ary mpizara tena marin-toerana io.
Gonzalo martinez dia hoy izy:
Afaka ny herinaratra. Saingy tsy dia natao ho an'ny solosaina finday mahazatra izany.
Aza gaga raha tsy fantatro ny Wifi na ny mpisitrika sasany, fakan-tsary (satria misy mpamily mihoatra ny tsinontsinona ny lozisialy), fa ao amin'ny repo dia tsy misy fonosana tsy fantatro, codecs, automatisation an'ny birao, na zavatra toa izany, na efa antitra ireo fonosana (nefa milamina toy ny vy)
Valiny tamin'i Gonzalo Martinez
Tsy mitovy hevitra aminao aho, misy repositories ofisialy miompana amin'io tanjona io, toy ny epel sy nux https://wiki.centos.org/TipsAndTricks/MultimediaOnCentOS7
Mandeha amin'ny lahatsoratra, tsara !!
Rehefa manana solosaina Linux be dia be ianao dia lasa haingana kokoa sy azo ampiasaina kokoa ny fametrahana.
marina izany, misaotra tamin'ny hevitrao
Alexmanafan dia hoy izy:
Salama mpiara-miasa, azoko atao ve ny manafoana sy manohy ny fampidinana repo? tohizo ny toerana nialako?
Valiny tamin'i Alexmanafan
namana misalasala, rehefa laniko ny repo amin'ny alàlan'ny http, izany hoe, jereo ny firafitry ny repo avy amin'ny httpd
http://172.16.1.9 Azoko ny pejy apache fa tiako apetraka http://172.16.1.9/??? hahita ny firafitr'i http.
Odnamra dia hoy izy:
Mila mametraka fanontaniana aho momba ny fisalasalana nipoitra ...
rsync -avzqlH –delete –delay-fanavaozana rsync:…. Na misy aza tsy maninona fa tsy mila apetraka aiza no halaina tahaka azy avy eo?
Ohatra: rsync -avzqlH –delete –delay-fanavaozana rsync:…. / run / media / miuser / Data / repository / centos7 / 7 /
Valiny tamin'i Odnamra
Daniel Morales placeholder image dia hoy izy:
Mitady fampahalalana amin'ny Internet aho nahazo ity boky fampianarana mahaliana nosoratanao ity, Arahabaina ianao noho izany. Mipetraka ny fanontaniako satria te-hamorona Mirror amin'ny fizarana Linux maro aho, Centos, OracleLinux, Debian, izy rehetra miaraka amin'ireo kinova farany napetrako tao amin'ilay orinasa. Fa ahoana no ahafahako manao ilay mpizara fitaratra mitovy amin'ny mitahiry fizarana sy kinova marobe? Tokony hamorona fampirimana hafa misy ny anaran'ny fizarana sns ve aho? Ireo repository ireo dia nohavaozina ho azy sa mila mandidy baiko matetika foana ve aho? Jereo ny hevitrao. Andro mahafinaritra
Valiny tamin'i Daniel Morales
Ahoana no hahalalanao raha voaloto ny Linux Mint anao?